Ny masoivoho Espaniôla any Jamaika dia nanao fitsidihana ara-pomba fanajana ny minisitry ny fizahantany ao Jamaika
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovaon'ny dia momba an'i Jamaika » Ny masoivoho Espaniôla any Jamaika dia nanao fitsidihana ara-pomba fanajana ny minisitry ny fizahantany ao Jamaika
Ny masoivohon'i Espana any Jamaika, ny praiminisitra Diego Bermejo Romero de Terreros (jereo ankavia amin'ny sary) dia nanao fitsidihana ara-pomba fanajana ny minisitry ny fizahantany ao Jamaika, Hon. Edmund Bartlett, ny 14 aprily 2021.
Tao anatin'ny areti-mandringana COVID-19 dia nivory ireo mpitarika roa tonta mba hiresaka ny zava-misy any Jamaika sy Espana.
Hevitra no nifanakalozana hevitra hanamafisana ny fifandraisana misy eo amin'ny firenena roa tonta sy hampitomboana ny fampiasam-bola sy ny fampiofanana.
Ny minisitry ny fizahan-tany any Jamaika, Bartlett dia niasa tsy nanasasatra nanamboatra ny fitsangatsanganana ho an'ny fireneny ary nanampy firenena hafa koa.
Nandritra ny fivorian'izy ireo dia nanao dinika ankapobeny momba ny toetry ny indostrian'ny fizahantany izy ireo taorian'ny fihanaky ny valanaretina COVID-19.
Niresaka momba ny fanamafisana ny fifandraisana eo amin'ireo firenena amin'ny sehatra toa ny fampiasam-bola, fanofanana ary fananganana ihany koa izy ireo. Tao amin'ny biraon'ny New Kingston an'ny minisitra Bartlett no natao ny fivoriana.